स्वागत नेपालको प्रश्नः फेसबुकेले निर्दोष भन्दैमा रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति हुन्छ ? - Sidha News
मृ*तकले आ*त्म*ह*त्या गर्छु भनेर भिडियोमा घोषणा गर्नु र आ*त्म*ह*त्या गर्नुको समयमा पक्कै पनि अन्तर छ । किनकि, भिडियोमा उनले सेन्डो लगाएका छन्, आ*त्म*ह*त्या गर्दा सर्ट–पाइन्ट नै । योबीचमा उनको मनस्थिति बदलिन सक्थ्यो भन्ने श्रीमान्को जिज्ञासालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु । तर, म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने स्वीट्जरल्यान्ड भनेको ‘सु*सा*इड टुरिजम’ मा पनि चर्चित देश हो ।
अमेरिकाबाट मान्छेले म अब आ*त्म*ह*त्या गर्न जान्छु भन्छ, स्वीट्जरल्यान्ड आउँछ र आ*त्म*ह*त्या गर्छ । त्यत्रो यात्रामा पनि उसको मन किन बदलिन्न ? अझ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश भरत उप्रेतीको आ*त्म*ह*त्या पनि एकै प्रयासमा भएको होइन । त्यसैले शालिकरामले बीचमा जति समय बिताएको भए पनि आ*त्म*ह*त्या गर्न नसक्ने कुनै कारण छैन ।
घ*टनास्थलमा बरामद भएको मोबाइलबाट भिडियो ल्यापटपमा कपी गर्दा कुनै चतुर विज्ञले आफ्नो साधनमा पनि सारेको हुन सक्छ । तर, त्यही माध्यमबाट मिडियामा पुगेको हुनसक्छ । प्रहरीले गलत नियतले भिडियो सार्वजनिक गरेको हो भने विभागीय कारबाही हुन सक्छ । तर, मिडियामा भिडियो पुगेको कारणले अ*नुसन्धान प्र*भावित हुनुहुँदैन । मिडियाले जुनसुकै स्रोतबाट पाए पनि सूचना वा भिडियो सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण गर्न सक्छ । त्यो उसको जिम्मेवारी हो । हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान मिडियामा भिडियो कसरी पुग्यो भन्नेमा होइन, शालिकरामले किन आत्महत्या गरे, उनको ज्यान किन गयो भन्नेमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । नयाँ पत्रिकाबाट